Samsung mobile oo leh madax shaashad jilicsan 2017 | Androidsis
Waxaan qabnay wararka qaar on Samsung ee cusub ee Galaxy X imanaya sanadka soo socda si loo tijaabiyo awoodda bandhigyada jilicsan ama laablaaban. Noocyada cirifka ah ee dhowr ka mid ah alaabteeda dhammaadka sarreeya ayaa sidoo kale qayb ka ahaa inay noqdaan tijaabo lagu hubinayo soo dhaweynta nooc kale oo taleefannada casriga ah leh shaashad leh dhinacyo qaloocan.
Waana tan iyo CES 2013 in Samsung ayaa tuuray warar xan ah ku saabsan telefoonka leh shaashadda noocan ah ee dabacsan tan iyo markii aan soo bandhigay teknolojiyadda. Laakiin hadda waa goorta soo-saaraha Kuuriya uu taleefanka ku soo bandhigi karo Shirka Caalamiga ah ee Mobile-ka ee soo socda. Waxaa jiri lahaa laba nooc oo yeelan lahaa tikniyoolajiyadda noocan ah, taleefan casri ah oo leh shaashad 5-inji ah oo loo rogi karo kiniin 8-inji ah.
Aaladuhu waxay isticmaali doonaan dyoodyo soo saara iftiinka dabiiciga waxaana la soo bandhigi karaa horaanta sanadka 2017. Macluumaad yar ayaa la heli karaa maxaa yeelay waa la ilaaliyay. Qaabka labaad ee Samsung wuxuu lahaan doonaa shaashaddaas 5-inji ah markii loo isticmaalo mobiil ahaan, laakiin way noqon kartaa loo beddelay qalab weyn marka aad soo bandhigeyso shaashad ilaa 8 inji u eg kaniiniga.
Waxeey heesataa loo yaqaan "Dooxada Mashruuca", iyo soo saaraha Kuuriya ayaa diyaar u noqon doona inuu soo bandhigo hal ama laba qalab oo loogu talagalay bisha Febraayo, marka Shirka Caalamiga ah ee Mobile-ka lagu qabto Barcelona. Qaar ka mid ah wararka ku saabsan mashruucan ayaa horeyba loo ogaa in mid kale sanadkii hore. Waa in la sheegaa in taleefankani uusan noqon doonin kii ugu horreeyay ee leh shaashad jilicsan oo AMOLED ah, maadaama Samsung horeyba ugu isticmaashay teknoolojiyadda taleefannada gacanta. Farqiga u dhexeeya ayaa ah in shaashadda cirifku ay adag tahay, halka shaashadda Dooxada Mashruuca ay ikhtiyaar u leedahay in la malleeyo.
Una soo jeedin xiiso leh waa inaan eegno hadday ugu dambayn dekedda gaarto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung ayaa bilaabi doonta taleefan leh shaashad jilicsan sanadka 2017
Awoodda Snapchat Soo ogow adigoo dhaafinaya Twitter-ka isticmaalayaasha maalinlaha ah